​विराटनगरमा भित्रियो शल्यक्रिया गर्ने अमेरिकी प्रविधि
विराटनगर । विराटनगर आँखा अस्पतालले पहिलोपटक विश्वकै सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि ‘जेप्टो फेको सर्जरी’ मार्फत मोतीविन्दुको उपचार सुरु गरेको छ ।
यन्त्रको मद्दतबाट आँखाको प्राकृतिक लेन्सलाई निकालेर कृत्रिम लेन्स राख्ने यो शल्यक्रिया गत वर्ष अमेरिकाबाट सुरु भएको हो ।
झन्डै ३० लाख....
​शुल्क फिर्ता लिन माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले दिए तीन दिनको अल्टीमेटम
काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुलाई शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन दबाब दिन विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन थाल्ने भएका छन् ।
विद्यालयको शुल्कवृद्धि, सरकार र बिद्यार्थीबीच विगतमा भएका सहमतिबिरुद्ध भएको निष्कर्ष निकाल्दै फिर्ता नलिए असहयोग आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई....
​चिनीमा युरिया मिसाउने पसलमा सिलबन्दी
खोटाङ । दिक्तेल बजारको एउटा पसलमा चिनीमा युरिया मल मिसाएर बेचेको भेटिएपछि प्रशासनले सिलबन्दी गरेको छ । जानकी जनरल सप्लायर्समा चिनी किन्न आएका एक ग्राहकले मल मिसाइएको गुनासो गरेपछि प्रशासनले छापा मारेको थियो ।
सप्लायर्सले युरिया मिसाएको गुनासो आएपछि अनुगमन....
​इटहरीमा एक जना पुरुष मृत फेला
इटहरी । इटहरी ६ स्थित बिपी चोक नजिक एक जना पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
इटहरीको रबि फ्रेस हाउसमा कार्यरत दोलखाको तामाकोशी –७ का ३० वर्षीय ज्ञानबहादुर सुनवार सोमबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ....
३३ केजी सुन काण्डमा संलग्नको सम्पत्ति रोक्का, व्यपारीसहित ३८ जनामाथि अनुसन्धान हुँदै
विराटनगर । ३३ केजी सुन काण्डमा संलग्न सनम शाक्यको हत्या आशंकामा पूर्वी नेपालका केही सुन व्यपारीसहित ३८ जनामाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ । प्रहरीले सनमको हत्या आशंकामा तानिएका विरुद्ध सम्पूर्ण कारोवार रोक्का गरी अनुसन्धान थालेको छ । अनुसन्धान तानिएका २१ जना भने फरार रहेको प्रहरीले....
​क्यान्सर पीडितलाई हङकङ र मकाउबाट सहयोग
पथरी । क्यान्सर पीडितलाई हङकङ र मकाउ मार रहेका नेपालीले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । राजघाट हङकङ समाज हङकङले उर्लाबारी—९ खोपिँडाडा निवासी क्यान्सर रोगबाट पीडित पार्वता लिम्बूको उपचारका लागि रु २ लाख ३४ हजार ९०२ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
​झापामा लागूऔषधसहित एक युवक पक्राउ
झापा । झापा प्रहरीले लागूऔषधसहित एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । मेचीनगर नगरपालिका ६ बाट प्रहरीले मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका ४ का १८ वर्षका आकाश खड्का लागुपदार्थ जन्य इन्जेक्सनसहित पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले खड्काबाट डाईजेपाम ७ एम्पुल, लुपिजेसिक ७ एम्पुल र फेनरागन....
​उदयपुरमा आगलागी, दश लाख बराबरको क्षति
उदयपुर । उदयपुरमा आइतबार आगलागीबाट दुई वटा घर जल्दा दशलाख बराबरको क्षति भएको छ ।
उदयपुरगढी गाउँपालिका ७ बस्ने हस्त बहादुर सार्कीको घरमा खाना पकाउने क्रममा चुल्होबाट अचानक आगलागी हुदा सार्कीसहित छिमेकी मानध्वज सार्कीको घर जलेको हो। आगलागी साँझ साढे पाँच बजेतित....
​यस्तो पोखरी, जहाँ नुहाएपछि निःसन्तानले बच्चा पाउँछन् !
लहान । के पोखरीमा स्नान र पूजापाठ गरेपछि गर्भवती भइन्छ ? पक्कै होइँदैन । किनकी आधुनिक विज्ञानले यस्तो कुरा मान्दैन । तर सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकास्थित एउटा पोखरीमा बर्षेनि गर्भवती बन्ने आशामा महिलाहरु नुहाउने गर्छन् ।
हरेक नयाँ वर्षको दोस्रो दिन यो....
​१५ जना मान्छे मारेको ध्रुवे हात्ती प्रेममा परेपछि ...
चितवन । पाँच वर्षअघि मानिस मारेर तहल्का मच्चाएको ‘ध्रुवे’ हात्ती फेरी देखिएको छ । चितवनको सुखीभार पोष्टमा फेरी देखिएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र सेना त्रसित बनेका छन् ।
ध्रुवे हात्तीले पोथी हात्ती ‘तीर्थमान कली’लाई सोमबार बिहान २ः४० बजे साङ्लो चुँडाएर जंगलतर्फ लगेको....